ChaCha + iPhone: Digniinta, Juqraafiga, Jawaabaha, Wadaagista | Martech Zone
Isniin, April 25, 2011 Sabtida, Oktoobar 29, 2011 Douglas Karr
Waxaan kaliya soo dejiyey oo aan ku ciyaaray CCC cusbooneysiintiisa Codsiga iPhone. Waan ku faraxsanahay… isticmaalkeedu waa mid fudud qaababkiisuna waa kuwo xoogan. Barnaamijkii asalka ahaa ee loo yaqaan 'ChaCha iPhone app' ayaa loo isticmaali jiray in jawaabaha kaliya laga riixo keydka xogta iyada oo loo marayo barnaamijka iPhone-ka dib loogu celiyo isticmaaleha. Codsigani waa tallaabada ugu sareysa - oo wuxuu leeyahay xoogaa kadis ah.
Sida la mid ah ChaCha goobta, wixii su'aalo ah ee aan jawaab loo helin waxaa lagu riixayaa barkadda hagaha ee loogu talagalay a jawaab toos ah.
ChaCha had iyo jeer way keydisay juquraafi ahaan su'aalaheeda laakiin waligaa ha ka liicin xogtaas. Iyadoo xog ururin ay ku riixeyso malaayiin jawaabo maalintii, taasi waa wax dahab ah oo macluumaad ah. Sida Scott uu ku sheegay fiidiyowgiisa ee ku saabsan barnaamijka - waa wax la qabatimo bal in la arko su'aalaha dadka kale ay ku weydiinayaan hareerahaaga.
Hadda waad awoodi kartaa kudar digniino! Ma heshay mowduuc xiise leh? Natiijooyinka adiga ku riix. Waan hubaa in gabadhaydu yeelan doonto Justin Bieber Su'aalaha waqti la'aan.
Wadaag su'aal hadda waa suurtagal iyada oo loo marayo emayl, SMS iyo Facebook!
Su'aalaha la xiriira way fududahay in la daalacdo!
Waa wax aad u wanaagsan in la arko kooxda Scott oo ku kala baxday hoggaanka iyagoo wata fikrado hal-abuur leh - runtiina si nadiif ah loogu buuxiyay codsi kooban. Marka la eego Google Panda jahawareer, talaabadani waxay kordhisaa la shaqeynta taageerayaasha hunguriga badan ee ChaCha. Marka laga eego dhanka suuq geynta, waxaan jeclahay inay labaduba dhiiri galinayaan daalacashada badan (oo leh Muuqaalka Near Me) sidoo kale wuxuu dhisaa astaamo kobcin ah si dadka isticmaala ay ugu soo laabtaan qaylodhaan).
Hambalyo kooxda ChaCha! Soo hel oo soo degso barnaamijka cusub ee ChaCha iPhone-ka iPhone-kaaga. Waxaan rajeynayaa inuu jiro nooc iPad ah oo soo socda - kani waa mid aad u qabow!